ओखरमा प्रशस्त मात्रामा भिटामिन बी कम्प्लेक्सका साथैओखरमा विभिन्न मिनरल, म्याग्नेसियम, जिंक, क्याल्सियम, आइरन, कपर, भिटामिनजस्ता पौष्टिक तत्व पाइन्छन् । जुन गर्भवती महिलाका लागि पनि निकै लाभदायक हुन्छ ।
ओखरमा फ्याटको मात्रा कम हुने भएकाले वृद्धवृद्धाहरूका लागि निकै लाभदायक हुन्छ ।ओखर मधुमेहका बिरामीका लागि पनि यो उत्तिकै लाभदायक छ ।
ओखरमा पर्याप्त मात्रामा ओमेगा – ३, फ्याटी एसिड पाइन्छ । यसले कोलस्ट्रोललाई सन्तुलित गर्छ । नियमित रूपमा यसको सेवन गरे मुटु रोगबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ ।
यसमा एन्टी अक्सिडेन्टको गुण हुन्छ । यसले शरीरका विभिन्न पीडामा पनि राहत प्रदान गर्छ । ओखरले क्यान्सरबाट समेत जोगाउँछ ।
ओखरको प्रयोगले अनावश्यक तौल कम गर्न सकिन्छ ।
भिजाएको बदामको तुलनामा अकुंरित बदाम धेरै स्वास्थ्यवर्दक हुने गर्दछ । बदामले स्तनमा दुध वृद्धि गर्दछ । कब्जियतको पीडाबाट मुक्ति पाउनका लागि पनि बदाम खाने गरिन्छ ।
Don't Miss it याद गर्नुहाेस् ! यस्ता कारणहरूबाट हुन सक्छ ब्लड क्यान्सर, जान्नुहाेस्
Up Next आलाेचनाबाट डराउनुहुन्छ ? यसरी ह्यन्डल गर्नुहाेस आलाेचना
यस्ता विभिन्न कारणले गर्दा मानिसहरुले निद्रालाई असर पुर्या्इरहेको हुन्छ
१) टेलिभिजन हेर्ने, वा ट्याब्लेट वा फोनमा व्यस्त रहने उज्यालो प्रकाशले हाम्रो सुत्ने व्यवहारमा असर गरेजस्तै टेलिभिजन, ट्याब्लेट, ल्यापटप वा…